​संसारकै गरिब राष्ट्रपति ! गरिब हुनुको कारण आश्चर्यपूर्ण !
Sat Feb 25, 2017 Studio Time: 17:23:04
सन् २०१० देखि उरूग्वेका राष्ट्रपती रहदै आएका जोसे म्यूजाइका संसारका सबैभन्दा गरिब राष्ट्रपती हुन् । उनी मासिक १२ लाख रूपैयाँको तलब पाउँछन् । तर, पनि संसारकै गरिब राष्ट्रिपति कसरी भए ? धेरैलाई आश्चार्य लाग्न सक्छ । तलब त उनको १२ लाख रुपैँया छ । त्यो तलबको ९० प्रतिशत रकम गरिब र साना ब्यवसायिहरूको हितमा खर्च गर्ने भएकाले उनी सँधै गरिब रहिरहेका हुन् ।
कतिपय मानिस उनको पहिरन र उनले उठ्ने बस्ने तरिकाको आलोचना समेत गर्छन । उनी आफ्नो रूप र पहिरनलाई त्यति महत्व दिदैनन । राष्ट्रपती हुनु अघि उनी टुपामारोस नामक पार्टीको लडाकु गुरिल्ला थिए । उनको पार्टिले रविनहूड्लेजस्तै जनतामारा ब्याङ्क, बन्दुक् निर्माण गर्ने कारखाना र ब्यापारिहरूबाट रूपैयाँ खोसेर गरिबहरूलाई दिन्थ्यो ।
उनले आत्मसात गरेको दर्शनले उनलाई जीवनको उद्धेश्य सम्पती कमाउनु र धनी बन्नु होइन, मुलुक र गरिबहरूको भलाईका लागि काम गर्नु हो भन्ने सिकाएको थियो । १४ बर्षे गुरिल्ला जिवनको क्रममा उनी दुइपटक जेल परे र ६ पटकसम्म हत्या प्रयासबाट जोगिए । २०१० मा राष्ट्रपती भए यता पनि देश र गरिब जनताका लागि उनको संघर्ष भिन्न रूपमा जारी छ ।
उनले आफू बस्नका लागि अत्यन्त साधारण घर रोजेका छन । जहाँ उनी आफ्नी पत्नी र एउटा कुकुरसँग बस्दै आएका छन । उनी आफ्नैै बारिमा फूल रोप्छन र बेच्छन । खेतिपातिको यो “पार्टटाइम जागिर“ ले यी राष्ट्रपतिलाई आफ्नो देशका बहुसंख्यक मान्छेले गर्दै आएको जीवन संघर्षबारे जानकार बनाएको छ । उनी सन् १९८७ मा निर्मित पुरानो भोक्स्व्यागन बिटल गाडी चलाउँछन । सरल र सादा जिन्दगी रमाउने यी राष्ट्रपतिलाई आरामदायी बेन्ट्लीको आकर्षणले तान्दैन । जोसेको सुुरक्षाका लागि दुइवटा गार्ड र तीनवटा खुट्टा भएको म्यान्यूला नामको एउटा कुकुर छ ।
राष्ट्रपतिहरूमा संसारकै सबैभन्दा गरिब भनेर चिनिने यी राष्ट्रप्रमुख आफू गरिब भएको कुरा भने स्विकार्दैनन । “म सबैभन्दा गरिब राष्ट्रपती होइन,“ उनी भन्छन “बाँच्नलाई धेरै सम्पत्ती चाहिने मानिस सबैभन्दा गरिब हो । मेरो जीवनशैली मेरा घाउहरूको प्रतिफल हो । म मेरै इतिहासको पुत्र हुँ । म एउटा चकटीमा मात्र रमाउन थालेको बर्षौ भइसक्यो ।
(अनुवाद पूर्ण रावल)